Zin Zin - October 16, 2021
နိုင်ငံတကာမှာ (လုံးဝ) ရှုံးနိမ့်နေတဲ့ မအလ စစ်ရေးနဲ့ဖောက်ထွက်ဖို့ လုပ်နေ အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့် အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်....... Zawgyi Version (ႏိုင္ငံတကာမွာ (လုံးဝ) ရႈံးနိမ့္ေနတဲ့မအလ စစ္ေရးနဲ႔ေဖာက္ထြက္ဖို႔ လုပ္ေန အစအဆုံးေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ ေအာက္ဆုံးတြင္videoပါသည္....... Videoၾကည့္ရန္.....
အာဖဂန်ဗလီတစ်ခုမှာ အိုက်အက်စ်အဖွဲ့ အ ​ေ သ ခံဗံုးခွဲမှုကြောင့်....see more အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကန်ဒါဟာမြို့ရှိ ဗလီတစ်ခုမှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းနေစဉ်အတွင်း အေသ ခံဗံု းခွဲတိုက်ခိုက် မှုကြောင့် လူ ၄၀...
နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကို အသုံးချပြီး တိုင်းရင်းသား လ က် န က် ကိုင်အဖွဲ့အချို့....see more လတ်တလော နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကို အသုံးချပြီး EAO အဖွဲ့အချို့မှ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌက ပြောပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး (၁၆/၂၀၂၁)မှာ ၎င်းကအခုလို...
''တော်လှန်ရေးမှာ လိပ်ပြာလုံတယ်'' ပန်ဆယ်လိုပြောပြီ အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့် အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်..... Zawgyi Version '''ေတာ္လွန္ေရးမွာ လိပ္ျပာလုံတယ္'' ပန္ဆယ္လိုေျပာၿပီ အစအဆုံးေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ ေအာက္ဆုံးတြင္videoပါသည္..... Videoၾကည့္ရန္......
အရူး​တွေက ဒလန်ဖြစ်​နေပြီလား ဒီနေ့မနက်၉နာရီကျော်
အရူး​တွေက ဒလန်ဖြစ်​နေပြီလား ဒီနေ့မနက်၉နာရီကျော် ရန်ကုန်. တာမွေ.အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်း.လမ်းဘေးတစ်နေရာ..အရူးတစ်ယောက်က စစ်ကားကိုတားကာ သတင်းပေးတယ်...........ရပ်ကွက်ထဲ.လမ်း(.....)နာမည်(......)လ က် န က်တွေအိမ်မှာ ဝှက်ထားတယ်..မြေအောက်လှုပ်ရှားနေတယ်တဲ့.. သူသိတဲ့ လူနာမည်..လမ်းနာမည်.သူ့ပါးစပ်ထဲရှိတာ.လျောက်ပြောလိုက်တာ.စစ်ကားတစ်စီး ကျွန်တော်နေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲ အရှိန်အဟုန်နဲ့ အပြင်းမောင်းဝင်လာတယ်...အရူးပြောတဲ့ နာမည် နဲ့ လမ်းထဲ.ရောက်တယ်..အရူးကတော့ စစ်ကားပေါ်မှာ. အခန့်သားထိုင်လို့..ကားပေါ်ကတောင် မဆင်းဘူး.အဲ့အိမ်ပဲတဲ့.မေးပဲငေါ့ပြလိုက်တာ... အဲ့ အိမ်ရှေ့ ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ.စစ်သားတွေကားပေါ်က ခုန်ဆင်း.အိမ်ကို ပတ်လည်ဝိုင်းထား..​ေ သ...
ပျူစောထီးအဖွဲ့နှင့် တမူး PDF တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး ပျူစောထီး ၃ ဦး ​ေ သ ဆုံး၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရ ထွက်ပြေးသွား
ပျူစောထီးအဖွဲ့နှင့် တမူး PDF တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး ပျူစောထီး ၃ ဦး ​ေ သ ဆုံး၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရ ထွက်ပြေးသွား အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်...... စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေး-တမူး အာရှလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ငြိမ်းအောင်ကျေးရွာနှင့် ပန်းသာကျေးရွာကြား ဟတ်ကျိန်းတံတားအနီးတွင် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီဝန်းကျင်၌...
Local News Zin Zin - October 15, 2021 0
ဆိုင်းတောင် မှော်ရှန်ရပ်ကွက် ရှင်းယဥ္ဟိုတယ်နားမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်...see more စစ်ကောင်စီသတင်းပေးတစ်ဦးဟု ယူဆရသူတစ်ဦးကို အမည်မသိလူတစ်စုက ပ စ် ခ တ် သ တ် ဖြ တ်မှု ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲခန့်က ဆိပ်မူ (ဆိုင်းတောင်)...
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်တွင် အိမ်ထဲမှာတင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် မိသားစုလိုက် အ သ တ် ခံရမှု ဖြစ်ပွား မန္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကင်းတုံရွာမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင် မိသားစုလိုက် ၄ လေ ာင်းပြိုင် အ သ တ်ခံရမှု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် နေ့က...
ကြမ်းပြီဟေ့ စလင်းမြို့မရဲစခန်းကို လောင် ချာ နဲ့ကို ထုပြီ မကွေးတိုင်း စလင်းမြို့မရဲစခန်း အပါဝင် ဌာန ၃ ခုကို အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ညက မကွေး(PRA)တပ်ဖွဲ့က M79 လောင်ချာနဲ့ ပ စ် ခ တ်တိုက်ခိုက်ရာမှာ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်အပါဝင် ရဲအများအပြား အပြင်းထန်...
မအလ နှင့်အဖွဲ့ တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း နောက်ဆက်တွဲအခြေနေ အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့် အောက်ဆုံးတွင်Videoပါသည်..... Zawgyi Version မအလ ႏွင့္အဖြဲ႕ တာဝန္မွရပ္စဲျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲအေျခေန အစအဆုံးေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ ေအာက္ဆုံးတြင္Videoပါသည္..... Videoၾကည့္ရန္.......